USB flash drive ကို | November 2019
တစ်ဦးကို USB drive ကနေ Windows7ကို install လုပ်ပါမှခြေလှမ်းလမ်းညွှန်အားဖြင့်အဆင့်
Operating System ကို - မျှ device ကိုစနစ်တကျလုပ်ကိုင်ဖို့တတ်နိုင်သောမပါဘဲ program တစ်ခု။ Linux နဲ့ Windows operating စနစ်များနှင့်လျော့နည်းလူသိများ - MacOS နှင့်အခြားလူတိုင်းအတွက် - Apple ကကနေစမတ်ဖုန်းအတူတူကုမ္ပဏီများထံမှကွန်ပျူတာများအဘို့, ကို iOS ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းကို USB drive ကိုအတူကွန်ပျူတာပေါ်မှာ Windows7ကို install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကနေ USB flash drive တစ်ခုပေါ်တွင်ဂိမ်းလွှဲပြောင်း
နောက်ပိုင်းတွင်အခြား PC ကိုကလွှဲပြောင်းဘို့အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်, ဥပမာ, တစ်ဦးကို USB flash drive ကိုတစ်ဦးကို PC ကနေဂိမ်းတွေကူးယူဖို့လိုအပ်လိမ့်မည်။ ရဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာလုပ်ဖို့ဘယ်လိုကြည့်ရှုကြပါစို့။ တိုက်ရိုက်ရဲ့ချောင်းကို pre-ပြင်ဆင်ထားရန်မည်သို့မည်ပုံရှာဖွေကြကုန်အံ့, လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုလွှဲပြောင်းကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းမပြုမီလွှဲပြောင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း။
သင့် TV ဖို့ချောင်းကိုချိတ်ဆက်ဖို့အားလုံးနည်းလမ်းများ
ကျွန်တော်တို့အတော်များများဟာ flash drive ကိုပေါ်သိမ်းထားသည့်တစ်အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်, ဗီဒီယို, သို့မဟုတ်ကိုယ့်ဓါတ်ပုံကိုကြည့်ဖို့သဘောတူရန်ပျော်ရွှင်ကြသည်။ လျှင်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို ပို. ပင်ဤမျှကောင်းသောအရည်အသွေးနှင့်ကြီးမားသော screen ပေါ်မှာနေဆဲဖြစ်တယ်, ဒါ။ သို့သော်အချို့ကိစ္စများတွင်အသုံးပြုသူများရိုးရိုးကတီဗီမှဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့မီဒီယာကိုချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သောကြောင်းသတိပြုမိကြသည်မဟုတ်။
အဆိုပါ Paragon Hard Disk ကို Manager ကိုတစ်ဦး bootable USB drive ကို Creating
သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာ recover သို့မဟုတ်ရုံ operating system ကိုစတင်မရှိဘဲကွဲပြားခြားနားသော tools တွေသုံးပြီးကစမ်းသပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အခါ bootable USB flash drive ကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်ကြောင်း, ကွဲပြားခြားနားသော operating system ကိုမအောင်မြင်မှုများအောက်မှာပုံပေါ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောကို USB-သယ်ဆောင်ကိုဖန်တီးရန်အထူးအစီအစဉ်များရှိပါသည်။ ရဲ့ Paragon Hard Disk ကို Manager က၏အကူအညီနှင့်အတူဤတာဝန်လုပ်ဆောင်ဖို့ဘယ်လိုကြည့်ရှုကြပါစို့။
BIOS ကို update ကိုညွှန်ကြားချက်ကပ် C
, BIOS ထဲမှာအဆင့်မြှင့်တင်မှုအတွက်အကြောင်းပြချက်ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်: သစ်ကိုပစ္စည်းကိရိယာများပြဿနာများ, သစ်ကိုမော်ဒယ်များအတွက်ဖော်ထုတ်ချို့တဲ့၏ဖျက်သိမ်းရေး၏ installation အတူ Motherboard ကပေါ် Processor ကို၏အစားထိုး။ သငျသညျကို manually တစ်ဦးက USB flash drive ကိုသုံးပြီးသည်ဤ updates များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားပါ။ အဘယ်သို့ငါကို USB drive ကနေ BIOS ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်ကြဘူး, သင်အနည်းငယ်ရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများ၌ဤတာဝန်ပြီးမြောက်နိုင်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာကို flash ကနေဂိမ်းတွေဆမ်း
အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေးနှစ်ဦးစလုံး - ခေတ်သစ်ကွန်ပျူတာအမျိုးမျိုးသောတာဝန်များကိုဖျော်ဖြေများအတွက်ကိရိယာဖြစ်သည်။ ဖျော်ဖြေရေး၏လူကြိုက်အများဆုံးပုံစံများတစ်ခုမှာဗီဒီယိုဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းဆော့ဖျဝဲယနေ့ခေတ်ကြီးမားသော volumes ကိုကြာ - သတ်မှတ်ပုံစံနှင့် installer ကိုထုပ်ပိုးခံနှစ်ဦးစလုံး။
ကွန်ပျူတာကို USB flash drive ကိုမမြင်ရပါဘူးအခါကိစ္စတွင်မှပဲ့ပြင်
အသုံးပြုသူတစ်ဦးက USB-port သည်အတွက်သတင်းအချက်အလက်သိုလှောင်ရေးကိရိယာည့သည့်အခါတဦးတည်းမှာ, ကွန်ပျူတာကိုတုံ့ပြန်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုမှတ်အထိကောင်းစားခြင်းရှိ၏: စနစ်တိတ်တဆိတ်သိုလှောင်မှုအလတ်စားယျတျောနှငျ့အတူအလုပ်မလုပ်နိုင်ကြဆုံးဖြတ်သည်။ ယခုမူကားအရာခပ်သိမ်းကွဲပြားခြားနားသည်နှင့်ကွန်ပျူတာကိုပင်ကို USB flash drive ကိုစဖြည့်စွက်ကြောင်းပြသရန်ငြင်းဆန်။
တစ်ဦး flash drive ကိုအပေါ်တစ်ဦး RAW file system ကို fix လုပ်နည်း
သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာဖို့ချောင်းကိုချိတ်ဆက်သည့်အခါတခါတရံ, သင်ကအပြစ်ကင်းစင်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့မတိုင်မီဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်းတစ်ဦးက format ရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့် ပတ်သက်. သတင်းစကား, ဤကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်။ အဆိုပါ drive ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ဖိုင်များကိုကိုပြသနိုင်ပါတယ်, သို့သော်, ဒါပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့ပုံစံများဖြင့်စာရွက်စာတမ်းများများ၏အမည်များအတွက်ထူးဆန်းတဲ့ (ထူးဆန်းတဲ့ဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပြီး, ။
စည်းကမ်းအဖြစ်, flash drive ကိုဝယ်ယူ, ငါတို့အထုပ်အပေါ်သတ်မှတ်ထားသောဝိသေသလက္ခဏာများခိုလှုံပါ၏။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်စစ်ဆင်ရေးအတွင်းကို USB flash drive ကိုတငျထားပြုမူ, နှင့်၎င်း၏အမှန်တကယ်မြန်နှုန်း၏မေးစရာများရှိနေပါသည်။ အဖတ်မြန်နှုန်း: ဒါဟာထိုကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်နှုန်းနှစ်ခု parameters တွေကိုပါဝင်သောချက်ချင်းရှင်းလင်းရပါမည်။
Flash drive ကိုအတူ Installing လက်မှတ်များ CryptoPro
အီလက်ထရောနစ်ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ် (EDS) ရှည်လျားနှင့်ခိုင်မြဲစွာအများပြည်သူအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများနှစ်ဦးစလုံး၌တည်ရှိနေသည်။ အဆိုပါနည်းပညာကိုလုံခြုံရေးလက်မှတ်များမှတဆင့်အကောင်အထည်ဖော်နေသည်အဖွဲ့အစည်းများဘုံနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖြစ်ကြသည်။ မကြာသေးမှီကမကြာခဏအချို့ကန့်သတ်ချမှတ်ထားတဲ့သော flash drive ကိုအပေါ်သိုလှောငျထား။ ဒီနေ့ကွန်ပျူတာတစ်ခု flash ကိုမီဒီယာကနေထိုကဲ့သို့သောလက်မှတ်များတပ်ဆင်ရန်သင်မည်သို့ပြောပြပါ။
သင်တစ်ဦးတည်းတံဆိပ်များ left ဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲများအနေဖြင့်, သင့်ကို USB-drive ကိုသတင်းအချက်အလက်ဖွင့်လှစ်? အဓိကအရာအချက်အလက်တွေအားလုံးကိုနဂိုအတိုင်းအများစုဖွယ်ရှိကြောင့်, စိုးရိမ်ထိတ်လန်ပါဘူး။ ကိုယ့ drive ပေါ်တွင်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှအတော်လေးဖြစ်နိုင်သည့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးထအနာ။ ဒါဟာဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေမှာသူ့ဟာသူကိုထင်ရှားစွာပြနိုင်ပါတယ်အစားဖိုင်များ shortcuts တွေကိုတစ် flash drive ကိုအပေါ်ထငျရှားဖိုင်တွဲတွေနဲ့ဖိုင်တွေတံဆိပ်များသို့လှည့်; ထိုသူအချို့တို့သည်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပြီ အပြောင်းအလဲတွေရှိနေသော်လည်းတစ် flash drive ကိုပေါ်အခမဲ့မှတ်ဉာဏ်ပမာဏတိုးမြှင့်သည်မဟုတ်, ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့် extension ကိုအတူ (ထိုဖိုင်တွဲများနှင့်ဖိုင်များကိုမသိသောခဲ့ပါတယ်။ "
မဟုတ် flash drive ကို format နဲ့မှဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်တောငျးလြှငျ, ဖိုင်များသိမ်းဆည်းဖို့ကိုဘယ်လို
အရေးကြီးသောအချက်အလက်များ၏သိုလှောင်မှုအတွက်ဖြုတ်မီဒီယာအသုံးပြုခြင်း - ဤများစွာသောလူတစ်ဦးအမှားဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်အလွယ်တကူပျောက်ဆုံးသွားနိုင်မယ့် USB flash drive ကိုခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပြီး, တန်ဖိုးရှိသော data တွေကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါလိမ့်မည်။ ဥပမာတစ်ခုဖတ်မရနိုငျတဲ့အခွအေနေဖြစ်ပြီး, ပုံစံကိုစတင်တောင်းဆိုမှုများ။ ငါဘယ်လိုလိုအပ်သောဖိုင်များကိုအရန်ဝင်ရောက်ခွင့်ရကြဘူးနောက်ပိုင်းမှာဆွေးနွေးကြပါလိမ့်မယ်။
Flash ကိုမှ optical discs တွေကိုထံမှဒေတာရေးရန်
Optical discs တွေကို (CD ကိုနှင့်ဒီဗီဒီ) ယခုမရှိသလောက်ဖြစ်သောကြောင့်အိတ်ဆောင်မီဒီယာ flash drive ကိုယူသူတို့၏နယ်ပယ်များအသုံးပြုသည်။ အောက်ကဆောင်းပါးမှာတော့ကျနော်တို့ flash ကိုမှ disk ထဲကသတင်းအချက်အလက်ကူးယူ၏နည်းလမ်းများရန်သင့်အားမိတ်ဆက်ပေးချင်တယ်။ ဘယ်လို flash ကိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှ disk ထဲကသတင်းအချက်အလက်လွှဲပြောင်းရန်တာ banal ကူးယူခြင်းမှကွဲပြားခြားနားသောသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောသိုလှောင်မှုမီဒီယာအကြားမည်သည့်ဖိုင်များကိုရွေ့လျားမဟုတ်ပါဘူး။
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလက်စွဲစာအုပ် flash ကိုတစ်ဦးက-Data ကိုမောင်း
A-Data ဟာမျှမျှတတငယ်ရွယ်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အလွန်တောက်ပဦးခေါငျး၏ခေါင်းဆောင်မှုကြောင့်သိသာပါတယ်။ အနာဂတျမှာ, ဒီကုမ္ပဏီတို့သည်ကြီးစွာသောအောင်မြင်မှုကမ်းလှမ်း! flash ကို၏ပြန်လည်ဖြေ-Data ကိုမောင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်အတိုင်းဤအမှု၌ကကူညီနိုင်မယ့်အချို့အလွန်ကောင်းသော tools များရှိသေး၏။ အဆိုပါ flash drive ကိုတစ်ဦးက-Data ကိုအထူးကု restore လုပ်နည်းတစ်ဦးက-Data ကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အွန်လိုင်းသိမ်းဆည်းမှု utility ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်, ထိုသို့အကြောင်းကိုအလွန်ပြော၏။
ရေဒီယိုများအတွက် flash drive ကို format
အတော်များများကဂီတချစ်သူများကိုကွန်ပျူတာထဲကနေနောက်ပိုင်းတွင်ရေဒီယိုကနေတဆင့်နားထောငျခွငျးအဘို့အကို USB flash drive ကိုအသံဖိုငျမြားကိုကူးယူပါ။ ဒါပေမယ့်အခြေအနေက device ကိုမှလေယာဉ်တင်သင်္ဘောကိုဆက်သွယ်ပြီးနောက်, သငျသညျတေးဂီတရေးစပ်၏စပီကာသို့မဟုတ်နားကြပ်ကနေမကြားလိမ့်မည်ဟုယူဆရသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ရုံဒီတိပ်ရီကော်ဒါကိုဂီတမှတျတမျးတငျထားသောအသံဖိုင်အမျိုးအစားကို support မပေးပါဘူး။
တစ်ဦးကို PC ပေါ်မှာ RAM ကိုအဖြစ် flash ကိုအသုံးပြုခြင်း
ပညတ်တော်တို့ကိုသို့မဟုတ်ဖွင့်ထားဖိုငျမြားကိုကွပ်မျက်သည့်အခါ Window များပေါ်တွင်စျေးပေါ PC များ, Laptop များနှင့် Tablet မကြာခဏနှေးကွေးနိုင်ပါတယ်။ သင်အနည်းငယ်အစီအစဉ်များကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ဂိမ်းစတင်ခဲ့သည့်အခါပြဿနာတစ်ခုသူ့ဟာသူတငျပွဖြစ်ပါတယ်အပေါင်းတို့၏အများစုမှာ။ များသောအားဖြင့်ဒီ RAM ကို၏သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီနေ့2GB of RAM ဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြုသူများသည်ယင်း၏တိုးစဉ်းစားနိုင်အောင်ကွန်ပျူတာ၏ပုံမှန်လည်ပတ်ဘို့မလုံလောက်သေးပါ။
ASUS ကမှတ်စုစာအုပ်ပေါ်တုတ်ကနေ boot
ASUS ကမှတ်စုစာအုပ်က၎င်း၏အရည်အသွေးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက်လူကြိုက်များရရှိခဲ့ပါပြီ။ ဒီထုတ်လုပ်သူများ devices အဖြစ်အများအပြားအခြားသူများထောက်ခံမှုထိုကဲ့သို့သော flash drive ကိုအဖြစ်ပြင်ပမီဒီယာကနေ boot တက်။ ဒီနေ့အသေးစိတျ၌ဤဖြစ်စဉ်ကိုအကြည့်အရှုအဖြစ်ဖြစ်နိုင်ချေပြဿနာတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဖြေရှင်းချက်မှာကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ အထွေထွေ algorithm ကိုအတွက်ချောင်းကိုအတူ ASUS က Download အားလုံးအတှကျတူညီနည်းလမ်းကို repeat, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့နောက်ထပ်လေ့လာစူးစမ်းတံ့သောအချို့သောတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိပါတယ်။
အဆိုပါ flash drive ကိုအပေါ်ဖိုင်တွေကိုမြင်ကြရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလျှင်အဘယ်အရာကို
Flash ကိုကဒ်ကိုင်ဆောင်သူကွန်ပျူတာတစ်ဖန်ပြန်လည်သင့်မီဒီယာထည့်အသုံးပြုပုံသူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမရှိတော့ရရှိနိုင်ပါသည်ရှိရာ, အခြေအနေများရှိနေပါသည်။ ဒါဟာပုံမှန်အတိုင်းအဖြစ်ကြည့်ပေမယ့် drive ကိုပေါ်မှာအားလုံးဘာမှမရှိဘူးကြောင်းကိုပုံရသည်, သို့သော်သင်သတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုရှိကွောငျးကိုသေချာဘို့ငါသိ၏။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သေးအချက်အလက်များ၏ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်အကြောင်းပြချက်စိုးရိမ်ထိတ်လန်ပါဘူး။
က boot drive ထဲမှတစ်ဦး bootable USB drive က Make
ကျွန်ုပ်တို့၏ site တွင် Boot တက်မီဒီယာနှင့် bootable CD ပြားအတွက်အများကြီးညွှန်ကြားချက်ရှိပါသည်။ ဒါဟာအမျိုးမျိုးသော software ကို၏အကူအညီဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ထို့အပြင်သူ၏အဓိက function ကိုဒီတာဝန်လုပ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် program တစ်ခုရှိသေး၏။ တစ်ဦးကို flash card ကို (USB က), တစ်ဦး drive ကိုအဖြစ်သင့်ကွန်ပျူတာကိုကဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်အရာ - ဘယ်လို bootable USB drive က bootable disk ကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ, bootable flash drive ကိုလူသိများသည်။
အဆိုပါ flash drive ကိုရုတ်တရက်ကျုံ့လာသောအခါတခါတရံအခြေအနေများရှိနေပါသည်။ ဤအခြေအနေများအတွက်အသုံးအများဆုံးအကြောင်းပြချက်ကတော့ကွန်ပျူတာကနေမမှန်ကန်ကြောင်းဖယ်ရှားရေး, မမှန်ကန်ကြောင်း Formatting, ဆင်းရဲသားကိုအရည်အသွေး Drive နှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များဖြစ်နိုင်သည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ပါကဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဘယ်လိုနားလည်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ ချောင်းကို၏ပမာဏကိုလျှော့ချ: အကြောင်းရင်းများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများအကြောင်းရင်းပေါ်မူတည်ပြီးသင်ကအများအပြားဖြေရှင်းနည်းများကိုသုံးနိုင်သည်။